Gaas: Dan gaar ah ayay leeyihiin dadka diidan heshiiska dowlada federaalka iyo Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa ku sheegay in dadka kasoo horjeeda heshiiskii dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland ay kala saxiixdeen kuwa leh dan shaqsiyadeed.
C/wali Gaas ayaa wuxuu sheegay in dadka ka biyo diidsan heshiiskaasi ay yihiin kuwa leh ujeedo gaar ah, balse aan loo baahneyn in dadkaasi ay dhibaato ka dhex abuuraan Bulsho deegaan wada dagta.
Hogaamiyaha Maamulka Puntland ayaa sidoo kale sheegay in Puntland iyo dadka deriska la’ah maslaxadooda ay ku jirto inay si nabadgelyo ah kuwada noolaadaan.
Wixii ka dambeeyay markii Puntland iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxiixdeen heshiiskii Garoowe ka dhacay, waxaa soo baxayay diidmo laga muujinaayay heshiiskaasi oo ku aadan in Waqooyiga Gaalkacyo in Puntland ay kamid tahay.
Dastuurka dalka u yaalo ayaa waxaa ku qoran in maamul Goboleed ay sameysan karaan labo Gobol iyo wixii ka badan, balse Dastuurka kuma qorno in Gobol iyo Bar loo sameeyo maamul Goboleed.